Archive du 20180718
Tetikasa Tatom Hapetraka ny tondrozotra
Nivory fanintelony tetsy amin’ny Panorama Andrainarivo omaly ireo mpiara-miombon’antoka ao anatin’ilay tetikasa fanatsarana ny lalam-pirenena faha 2 sy ny manodidina azy na ny Tatom.
« Carrefour de la formation, des metiers et de l’emploi » Hisy tolotr’asa ho an’ny olon-dehibe
Hotanterahina ny 27 sy ny 28 jolay ho avy izao etsy amin’ny Alliance Française Andavamamba ilay hetsika “Carrefour de la formation, des métiers et de l’emploi” andiany faharoa karakarain’izy ireo.
Ady amin’ny asan-dahalo Misy mafia misakana !
Tsy vao izao ny nisian’ny resaka dahalo teto amin’ny firenena fa efa hatry ny ela, ary vao mainka miha mahazo vahana hatrany.
Antananarivo Renivohitra Raikitra ny fanesorana ireo mpivarotra tsy ara-dalàna
Natomboka omaly talata 17 jolay 2018 ny hetsika lehibe izay fanalana sy fandaminana ireo mpivarotra amoron-dalana teny amin’ny faritra Analakely sy ny manodidina,
Mpivarotra amoron-dalana Betsaka ireo tsy manana toeram-panariana rano maloto sy fako
Tsy manana toeram-panariana fako sy ny rano maloto avokoa ny ankamaroan’ireo mpivarotra amoron-dalana eto amintsika.
Famokarana lafarinina avy amin’ny mangahazo Azo trandrahana tsara eto Madagasikara
Ny mangahazo no sakafo hohanina sy vokarin’ny Malagasy aorian’ny vary ary rariny raha tokony hojerena manokana ny ho tokony fampandrosoana ny fambolena azy.
Didimpoitra Handaniana hatrany amin’ny 1 tapitrisa Ariary
Ilana vola hatrany amin’ny 1 tapitrisa Ar amin’izao ny manao hasoavan-jaza iray, indrindra ho an’ireo mbola mandala ny fomba Malagasy.